Basikety-Afrobasket: hatao “huis clos” ny fifanintsanana any Kigali - ewa.mg
News - Basikety-Afrobasket: hatao “huis clos” ny fifanintsanana any Kigali
Araka ny efa fantatra, hotontosaina
ny 25 hatramin’ny 29 novambra izao any Kigali Rwanda ny
fifanintsanana eo amin’ny lalao Afrobasket 2021. Tapaka fa hatao
“huis clos” ity fifaninanana ity, noho ny mbola fihanaky ny
tsimokaretina Coronavirus any an-toerana. Tsy hisy, araka izany, ny
mpijery fa ny mpilalao sy ny mpitsara, miaraka amin’ireo “Staff”
isan-karazany, isaky ny ekipa ihany ny mahazo miditra ao amin’ny
kianja. Nohamafisin’ny filohan’ny federasiona malagasy ny basikety,
Ramaroson Jean Michel, fa voarakitra anatin’ny taratasy nalefan’ny
FIBA mihitsy izany.
Mahakasika ity lalao ity hatrany,
raha ny tokony ho izy, ny 20 novambra no hanainga ny delegasiona
malagasy, hoy ny filohan’ny FMBB, saingy hiankina betsaka amin’ny
fisokafan’ny sidina eto amintsika izany. Aorian’io, ny fifaninanana
Bal “Basket AfroLeague” no hatao any Rwanda, ka ny 5 hatramin’ny 15
desambra no hizorany. Ny GNBC moa no solontenantsika amin’izany,
araka ny efa notaterina teto, ny NBA avokoa no miantoka ny rehetra,
mbola mandray tambin-kasasarana, toy ireny mpilalao matihanina any
ivelany koa ny mpilalao.
L’article Basikety-Afrobasket: hatao “huis clos” ny fifanintsanana any Kigali a été récupéré chez Newsmada.
Nafana ny fifandonana. Zandary efadahy nifampitifitra tamin’ny dahalo am-polony tany amin’ny tananan’Antsijorano fokontany Bemelo kaomina Ambanivohitra Satrokala distrikan’Ihosy, ny alin’ny sabotsy 27 novambra hifoha alahady lasa teo. Maty voatifitry ny dahalo tamin’izany ny zandary iray kilasy ambony ao amin’ny borigady Mahasoa, iray hafa kosa naratra mafy noho ny fahavoazany ary nentina namonjy toeram-pitsaboina haingana. Izany no vokatry ny fifandonanan’ny dahalo sy ny zandary miasa ao amin’ny borigady nanao ny asa fitsidiham-paritra tany an-toerana. Araka ny loharanom-baovao voaray avy eo anivon’ny sampana serasera ny zandarmariam-pirenena dia fanarahan-dia omby no nahatonga izao voina nihatra tamin’ny zandary amperin’asa miisa roa ireto. Dahalo am-polony nirongo basy sy zava-maranitra no nandroba ka nangalatra omby manodidina ny 40 teo amin’io Tanana voatondro io. Nahary fampandrenesana momba izany indrindra ireo zandary avy amin’ity borigady ity, ka tonga mivantana nanao ny fikarohana avy hatrany. Ireo fokonolona tao an-tanana kosa izay efa nialoha lalana nanao ny fanarahan-dia. Nandositra namonjy niankandrefana ireo olon-dratsy ireo, rah any fitantaran’ireo nanatri-maso, rehefa nahazo ny azany, saingy niezaka nanaraka hatrany ireo fokonolona sy ny zandary. Tamin’io alin’io fanafihana io moa dia tafajanona tany anaty ala ireto dahalo, nisy ny sasany tamin’ireo kosa no nandroaka ny omby ihany. Rehefa nahatsikaritra fa nanara-dia azy ireo ny fokonolona tany an-toerana dia nanomboka nitifitra variraraka ireo dahalo. Voatery namaly tifitra noho izany ireto zandary niaro ireo mpiara-dia aminy, ka tratran’ny vela-pandrika. Vao nitodika kely izy nijery ny zava-misy ary dia niharan’ny tifitra variraraka ity farany, ka lavo avy hatrany, ny zandary iray kosa naratra mafy. Nanohy ny lalana niaraka tamin’ireo omby halatra ireto dahalo rehefa nahita ireto farany fa niharam-boina, raha toa ka ny omby 20 isa tamin’izany tafaverina noho ny fifanjevana. Na dia teo aza izany tsy nijanona fa mbola raikitra ny fifampitifirana teo amin’ireo zandary sisa sy ireo dahalo. Taorian’izay vao afaka niantso namana izy ireo rehefa tsy sahy nanantona azy ireo intsony ireo jiolahy ka tonga ireo zandary maromaro. Natao ny fizahana sy fikarohana ireo jiolahy, saingy tsy tratra intsony. Valérie R. L’article Fanenjehana dahalo tany Ihosy : Zandary iray maty voatifitra, iray naratra est apparu en premier sur .L’article Fanenjehana dahalo tany Ihosy : Zandary iray maty voatifitra, iray naratra a été récupéré chez Triatra.
Hatramin’ny nisian’ny Covid-19: miisa 19 875 ireo olona voasazy raha 2 197 naiditra violon
Namoaka tatitra ny teo anivon’ny polisim-pirenena momba ny asa vitan’izy ireo manoloana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus nanomboka ny volana marsa ka hatramin’izao. Miisa 19 875 ireo olona voasazy raha 2 197 kosa ireo naiditra violon noho ny tsy fanaharan-dalàna…Nambaran’ny tatitra voaray teo anivon’ny sampandraharaha misahana ny fampitam-baovao eo anivon’ny polisim-pirenena fa hatramin’ny nahatongavan’ny valanaretina coronavirus teto amintsika nanomboka ny volana marsa teo ka hatramin’izao ireto tatitra ireto. Nisy ny fisorohana ho an’ny faritanin’Antananarivo (Faritra Analamanga, Vakinankaratra, Itasy ary Bongolava) ka nisy ny fizarana arotava miisa 108 748 nataon’ny polisy, olona miisa 19 601 kosa no nanao fanentanana amin’ny tokony hiarovan’izy ireo tena amin’ny fihanaky ny valanaretina. Nohamafisin’ny polisy fa misy ihany ireo tsy manaraka ny toromarika rehetra napetraka ka tsy maintsy nampiharan-dalàna. Miisa 19 875 ireo olona voasazy nanao asa iombonana ho tombontsoan’ny besinimaro raha 2 197 kosa ireo naiditra violon. Teo ihany koa ny tatitra momba ny asa vitan’ny polisim-pirenena tao anatin’izay fiatrehana ny fiparitahan’ny valanaretina izay ihany nanomboka ny 9 aogositra 2020 ka hatramin’ny 21 aogositra 2020 teo niaraka tamin’ireo kaomisaria foibe eto amin’ny faritan’Antananarivo, Vakinankaratra sy Itasy ary Bongolava ireo.Marobe ireo moto nandalo fisavana…Ho an’ny fanaraha-maso ara-pahasalamana, nisy ireo olon-tsotra voasava nandritra ny “couvre feu” ka miisa 441 izy ireo raha 131 ireo voasambotra, miisa 287 ireo nosavaina kara-panondro, 150 ireo nanao fanadihadiana manokana.Fiarakely miisa 672 no nandalo fisavaka ka 85 naiditra ambalampamonjana « fourrière », fiara 56 voatery nosintonina ny taratasiny noho ny tsy fahatomombanana hita. Teo koa ireo fiara tsy nanaiky nijanona fa nandositra ka miisa 10 izy ireo. Fiara lehibe miisa 696 voasava ka 29 amin’ireo naiditra “fourrière”. Moto miisa 679 no voasavan’ny polisy ka 51 amin’ireo tsy tomombana ny taratasy raha 10 ireo nitsoaka tsy nanaiky nosavaina.Jean ClaudeL’article Hatramin’ny nisian’ny Covid-19: miisa 19 875 ireo olona voasazy raha 2 197 naiditra violon a été récupéré chez Newsmada.
“Maso Miafina clan”: mikononkonona hira vaovao
« Maso Miafina clan”, vondrona mivoy ny gadona rap gasy, niforona ny taona 2016 tany ho any. Misy valo mirahalahy ny mpikambana ao anatiny. Ahitana an-dry Môzara, i Mental, i Goostmeh, i Tsihoarana, i Jackass (Kiaky), i Soa Rabe, i Tyjah Natoraly ary i Rihlain. Efa maro ny hira nanamarika azy ireo. Efa namoaka rindrantsary sy rakikira isan-karazany, azon’ny rehetra arahina ao amin’ny pejy “facebook” “Maso Miafina Ofisialy” izany. Ankoatra izay, eo am-piketrehana hira vaovao ry zalahy ireto ary hivoaka tsy ho ela izany, raha ny filazan’izy ireo.Maro ny sehatra efa nahitana ny “Maso Miafina”, anisan’ny nandraisany anjara, ohatra, ny “Rap Gasy Unity” andiany voalohany. Ny akaiky indrindra amin’ity taona ity, ilay hetsika “Rap ho an’ny taniko”, andraisanay anjara, anio 31oktobra ao amin’ny CLT Tsiadana. Tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny faha-15 taon’ny Animalk. Manana eritreritra ny handeha lavitra eo amin’ny tontolon’ny mozika izy ireo ary misokatra ho an’ny rehetra te hiara-kiasa aminy.Narilala L’article “Maso Miafina clan”: mikononkonona hira vaovao a été récupéré chez Newsmada.